खुशीको खबर : इजरायल रोजगारीको आवेदन केहि दिनमै खुल्छ : राजदूत डा.शाक्य – Ujyaalo Patrika
इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा.अञ्जान शाक्यले केही दिनमै इजरायल रोजगारीको लागि आवेदन खुल्ने बताएकी छन्। उक्त आवेदन अनुसार नेपालबाट महिला र पुरुष गरी एक हजार जना युवा सहायक कामदारको रुपमा इजरायल जान पाउने छन्।
इजरायल जान युवाहरुले कति पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने सापकोटा भन्छन्, ‘अब इजरायल जाने कुरा निश्चित भयो। केही दिनमा आवेदन फारम खुल्छ। युवाहरुले कति पैसा तिर्नु पर्छ भन्ने कुरामा चाहीँ विज्ञापन तयार भएर आएसकेपछि थाहा हुन्छ। सामान्य मेडिकललगायतको खर्च लाग्न पनि सक्छ अथवा त्यो खर्च नलाग्ने पनि हुन सक्छ । त्यो माथिबाट (श्रम मन्त्रालय) क्लियर भएर आइसकेपछि थाहा हुन्छ।’ DC नेपाल वाट साभार
Next यी युवाको अंगालोमा लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद विमला ओली ? को हुन् यी युबक ? तस्बिर कसरी भयो सार्बजनिक ?